Mividiana pilina ejika vao haingana mandritra ny $ 5 ary manomboka manao firaisana tsy manam-petra
Inona ny ejaculation aloha?
Rehefa mivoaka ny filahiana dia mila hetsika roa misesy no mitranga: ny voalohany dia ny emission ary avy eo dia fandroahana. Ny siansa ara-pitsaboana dia mino fa ny neurotransmitter serotonin dia tompon'andraikitra amin'ny modulasi ejaculation. Ny tsy fahampian'ny serotonine tsy ampy dia heverina ho antony mety hahatonga ny ejaculation aloha loatra.
Rehefa misy ejaculation aloha loatra amin'ny lehilahy iray, dia mety hahamenatra, manala baraka ary hahatonga azy hahatsapa ho toy ny lehilahy. Mety handratra fifandraisana mihitsy aza izy io noho ny tsy fahafaham-po ny olon-tiany. Raha sendra anao io dia aza manahy fa fitarainana iraisan'ny lahy indrindra io, indrindra ny lehilahy tanora. Raha ny statistika dia misy fiantraikany amin'ny 25% -40% ny lehilahy any Etazonia ny PE. Raha ny tena izy, ny ankamaroan'ny lehilahy dia niaina izany farafahakeliny indray mandeha tamin'ny fihaonany ara-nofo. Matetika dia mitranga eo am-piandohana amin'ny fifandraisana izany, noho ny tebiteby sy ny fanentanana.
Raha misy lehilahy voamarina amin'ny fomba ofisialy fa misy PE miverimberina, dia tsy ho very ny fanantenana rehetra. Ny fanatsarana sy ny fampiofanana ny fahazarana ara-tsaina mba hampivelarana ny fanentanana mandrisika ny fanaovana firaisana dia ampiasaina ho fitsaboana ny PE. Efa misy ny fanafody eny an-tsena nefa ampiasaina ihany koa. Toy ny amin'izao fotoana izao Dapoxetine dia zava-mahadomelina tokana miaraka amin'ny alalana ara-dalàna momba ny fitsaboana ny PE voamarina ofisialy, saingy mbola ao anatin'ny fizahana fitsapana any Etazonia sy any amin'ny firenena eropeana izy ankehitriny.
Ny ejaculation aloha dia miteraka: inona no mahatonga ny ejaculation aloha loatra?
Ny fanontaniana mahasosotra momba ny antony mahatonga ny ejaculation aloha loatra dia iray izay mamaky ny sain'ny lehilahy maro. Mety misy antony maro samihafa mahatonga ny PE: ny tanora, ny olana ara-tsaina, ny olana ara-pahasalamana, sns. Tsy mora foana ny mamantatra izay tena antony mahatonga ireo olana ireo amin'ny lehilahy iray, saingy, antenaina fa rehefa avy nanadihady ny vaovao natambatra izahay, ianao Hahafantatra tsara kokoa ny antony mahatonga ny PE misy fiatraikany aminao aho.
Misy antony maro samihafa tokony hodinihina rehefa manandrana mamantatra izay tompon'andraikitra amin'ny PE ao aminao na amin'ny vadinao. Hiresaka momba ny antony mahazatra indrindra eto amin'ity pejy ity izahay ary hiezaka hanome anao fahitana momba ity toe-javatra mahasosotra ity.
Olana amin'ny fanahiana: Rehefa manandrana mamantatra ny antony mahatonga ny ejaculation aloha loatra, lehilahy maro no mahita fa ny tebiteby no antony lehibe indrindra. Ity no iray amin'ireo antony matetika matetika mahatonga ny lehilahy hanana olana amin'ny fivoahana. Amin'ny ankapobeny, fantatrao fa hanao firaisana ianao ary mitebiteby. Mitebiteby ianao satria te-hahazo antoka fa manome fahafaham-po ny olon-tianao alohan'ny fara tampony. Ity fanahiana ity (na dia avy amin'ny fikasana tsara aza) dia ratsy amin'ny psyche ankapobeny anao ary, amin'ny farany, ny rivotra dia miteraka olana PE ho anao. Ny fanahianao dia manosika anao hivoaka haingana. Izany dia mitarika amin'ny fanahiana bebe kokoa izay miteraka olana bebe kokoa. Mety ho lasa tsingerina manimba tena sy mahasosotra ny tena izany. Ny vaovao tsara dia ny ahafahanao mandresy ny olana ara-pitaintainanao mifandraika amin'ny firaisana. Ny vaovao ratsy dia maharitra fotoana fohy. Mila mamerina manamboatra ny atidoha sy ny vatanao ianao mba hampihena anao, handresena ny fanahiana ary hankafizanao ny firaisana. Raha mila fampahalalana tsara momba ny fiatrehana ny fanahiana dia araho ny rohy etsy ambany.
Olana meloka: Ny fahatsapana ho meloka, toy ny fitaintainanana, dia iray amin'ireo olana mahazatra indrindra momba ny PE. Ny fahatsiarovan-tena dia miasa toy ny fitaintainanana ao anatin'ny tsingerina iray ihany: meloka ianao noho ny fanananao olana PE izay miteraka fihenjanana sy fanahiana izay mahatonga anao hivoaka ety am-boalohany. Kitapo tsy maintsy tapaka. Mila miatrika ny lesoka ianao ary mianatra mifehy ny olanao.
Haavo ny traikefa: Ny haavon'ny fiainanao eo amin'ny lahy sy ny vavy dia mety ho antony lehibe mahatonga anao hanana olana amin'ny ejakma. Ireo lehilahy tsy dia manana traikefa firy amin'ny firaisana dia mirona hanana olana ejaculation aloha loatra. Ity antony ity dia matetika hita amin'ny tovolahy tanora izay tsy voatery nanao firaisana toy ny olona matotra kely kokoa. Amin'ny maha olona tsy dia za-draharaha ny firaisana ara-nofo dia mahazatra anao ny mientanentana loatra ary tonga haingana loatra.
Teknolojika filokana: Matetika mitarika olana amin'ny PE ny teknikan'ny filokana matetika. Amin'ny ankapobeny, raha mifarana haingana ianao rehefa mahafaly ny tenanao dia hanana fotoana sarotra maharitra mandritra ny fotoana maharitra miaraka amin'ny vadinao ianao. Soa ihany ho anao fa olana mora raisina io. Ny tena ilainao dia ny manomboka mampitombo ny fotoana laninao. Raha toa ianao ka mifarana amin'ny minitra iray dia mandehana roa minitra. Raha vantany vao azonao io dia manandrama mandritra ny efatra minitra. Tena afaka mianatra zavatra betsaka momba ny filanao ara-nofo ianao amin'ny alàlan'ny fampiharana teknikan'ny filokana. Ireo fanazaran-tena ireo dia hahafahanao mahita tombony be dia be ao amin'ny efitrano fandrianao.
Olana eo amin'ny fifandraisana: Miady amin'ny vadinao ve ianao? Manana tohan-kevitra ve ianao izay misy fiatraikany eo amin'ny fifandraisanareo? Raha izany dia mety hiteraka olana ara-nofo eo amin'ny fiarahanareo io fihenjanana io. Rehefa miady amin'ny sakaizanao ianao, ny vadinao, ny olon-tianao, sns, ny fihetseham-po, ny fihenjanana ary ny haavon'ny adin-tsaina dia avo lenta avokoa. Izany dia mitarika fanahiana sy tsy fahasambarana ao amin'ny efitrano fandrian. Raha manana olana ara-pifandraisana ianao dieny izao dia mety ho fantatrao izao toe-javatra izao: miady ianao, manao "make-up", manao firaisana. Na izany aza, fantatrao fa ny "makiazy" dia vetivety ihany ka mbola miady saina sy mitebiteby lava ianao rehefa manao firaisana. Manakana anao tsy hiala sasatra izany ary hahatonga anao hivoaka ety aloha.
Gene lova: Fantatrao ve fa ny fototarazonao dia mety hiteraka ejaculation aloha loatra? Marina izany! Lehilahy maro izay mijaly amin'ny PE no mahita fa ny rainy koa dia nijaly tamin'io toe-javatra io ihany. Ny mpahay siansa dia manao teorika an'ity scenario ity: Inoana fa 1000 taona lasa izay dia namorona valiny ejaculation mialoha ny fotoana ny zohy izay nanampy azy ireo hiaina. Ny teôria dia ilay olona lava-bato izay nahavita nanetsika haingana indrindra dia ilay azo inoana fa ho velona noho ny habetsahan'ny ankizy. Raha ny filazan'ny mpahay siansa, ny firaisana ara-nofo amin'izao fotoana izao dia ny fahaveloman'ny fahafinaretana kokoa. Ny tanjon'ny firaisana ara-nofo dia ny fitondrana vohoka mifanohitra amin'ny fahafinaretana amin'ny fahafinaretana. Na mino ianao na tsia io teoria io dia miankina aminao. Ny vaovao tsara dia tsy tokony avelanao hibaiko ny lahy sy ny vavy ny génétique. Araho ny rohy etsy ambany mba hahazoana ny olana momba ny ejaculation aloha.
Erectile Dysfunction (ED): Lehilahy maro no tsy mahalala an'io fa, matetika, ny tsy fomban'ny erectile dia mety miteraka PE. Raha nifoha tamin'ny fotoana rehetra ianao nandritra ny 15 taona lasa, dia fantatrao ny erectile dysfunciton (ED). Tototry ny varotra isika aorian'ny varotra momba io lohahevitra io. Ny ED dia miteraka PE noho ny tebiteby sy ny tsy fahatokisan-tena. Ireo fihetsem-po ireo dia mifandraika amin'ny ED ary afaka mifandray mivantana amin'ny PE. Raha ny tena izy, ny lehilahy miaraka amin'i ED dia manomboka manao firaisana nefa miahiahy mafy izy amin'ny fitazonana ny fananganana azy ka mihazakazaka mamaky ilay fihetsika izay miteraka fiafarana haingana.
Olana amin'ny tiroid: Ny olana momba ny PE sy tiroid dia mbola tsy nianarana vao haingana. Avy eo, tamin'ny 2006, ny dokotera dia namoaka fanadihadiana iray izay nandinika ny fifandraisana misy eo amin'ny olan'ny tiroid (hyper sy hypothyroid) sy ny ejaculation aloha loatra. Ny zavatra hitan'izy ireo dia ireo lehilahy manana olana hypothyroid dia ambany indrindra ny olana ejaculation. Na izany aza, tamin'ireo lehilahy nanana olana hyperthyroid, 50% no niaiky fa efa niaina olana tamin'ny fivoahana ejaculation teo amin'ny fiainany izy ireo. Raha mieritreritra ianao fa ny tiroidinao no mahatonga ny olana amin'ny PE, dia tokony manatona ny dokoteranao ianao.
Olana amin'ny hormonina: Indraindray, ny olana amin'ny hormonina dia mety miteraka olana ara-pananahana PE sy ara-nofo. Rehefa mihalehibe ianao, ny haavon'ny testosterone ao amin'ny vatanao dia miteraka rotsakorana izay mety hisy fiatraikany ratsy amin'ny tanjakao. Ny ambaratonga ambany amin'ny DHEA sy testosterone dia naseho fa iray amin'ireo meloka indrindra amin'ny fisiolojika momba ny ejaculation aloha loatra. Raha mieritreritra ianao fa ny tsy fahampian'ny hormona dia miteraka olana eo amin'ny fivoahana ezy, dia manoro hevitra anao aho hiresaka amin'ny dokotera. Betsaka ny famenon-tsakafo testosterone azo alaina ary ny dokoteranao dia manana ny hevitra tsara indrindra momba izay mety indrindra aminao.
Amin'ny ankapobeny, ireo no olana mahazatra indrindra momba ny PE. Ny fahafantarana ny fiantraikan'izany olana izany eo aminao sy ny fitarihanao ny toe-pahasalamanao dia zava-dehibe amin'ny famahana ny olana.
Fitsaboana ejaculation aloha: ahoana no hitsaboana ny ejaculation aloha loatra?
Ny firesahana amin'ny mpitsabo anao momba ny olanao akaiky dia mety ho dingana voalohany handresena ilay aretina. Ny firesahana amin'ny dokotera na dokotera dia afaka manampy anao hahatsiaro ho maivamaivana ary mety ho afaka manondro anao amin'ny làlan-kaleha izy ireo amin'ny resaka fanazaran-tena na fanafody izay afaka manampy amin'ny fifehezana ny ejaculation aloha. Azonao atao ny mieritreritra ireo fanontaniana tianao hapetraka amin'ny dokoteranao alohan'ny hidiranao, mba hahazoana antoka fa manontany ny zavatra tadiavinao ianao.
Raha mitady ny fitsaboana ejaculation aloha loatra ianao, dia te handinika ity fampahalalana manaraka ity ianao.
Misy fomba maromaro handehanana amin'ny fitsaboana ny ejaculation aloha. Taloha dia nino ny dokotera fa ara-tsaina na ara-tsaina fotsiny io aretina io, saingy mahatsikaritra ireo mpitsabo ankehitriny fa sarotra kokoa noho io ny aretina.
Izy io dia misy lafiny ara-batana sy ara-tsaina izay afaka mandray anjara lehibe amin'ny olana. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, ny lehilahy manatona dokotera dia homena fanafody ary asaina miasa amin'ny fanazaran-tena sasany ho fitsaboana ejaculation aloha loatra.
Ny sasany amin'ireo pilina tena be mpampiasa, spray desensitising ary vokatra hafa amin'ny fisorohana ny ejaculation aloha loatra dia nitanisa ny sasany amin'ireo safidy malaza etsy ambany:
Misy fanafody isan-karazany azo ampiasaina hanasitranana ny aretina; iray amin'ireo vaovao indrindra dia ny dapoxetine. Tena vaovao ity ary mbola andrana amin'ny FDA. Ny fandinihana natao vao haingana dia nanamafy fa ny marary nihinana takelaka dia nahatsikaritra fanatsarana. Ny voka-dratsin'ity zava-mahadomelina ity dia misy fisalasalana sy aretin'andoha, na dia malemy aza ny vokany.
Misy ihany koa ny karazana menaka fanakiviana; ireo dia ampiasaina mba hahatonga ny filahiana tsy ho mora tohina. Manampy izany satria maharitra ela kokoa ny vehivavy vao mahatratra orgasme noho ny an'ny lehilahy. Ny vahaolana manala baraka dia misy amin'ny menaka fanosotra, menaka na tsifotra ary tokony ho afaka hanitatra ny fotoana fanaovana firaisana alohan'ny ejaculation. Na izany aza, raha ampiasaina tsy misy kapaoty io dia mety hanelingelina ny sainy koa izany ka miteraka olana lehibe kokoa.
Misy ihany koa ny fanafody sasany toy ny Prozac sy ireo antidepressants isan-karazany izay mampihena ny ejaculation ho iray amin'ireo voka-dratsin'izy ireo. Mahasoa ireo satria ny doka kely sisa no takiana. Tsy mila mihinana an'ireny isan'andro koa ianao, fa mihinana fatra kely alohan'ny hanaovana firaisana dia tokony ho betsaka. Ny fandinihana natao tato ho ato dia nilaza fa tsy miasa afa-tsy amin'ny 39% amin'ireo marary voasedra. Betsaka koa ny voka-dratsiny, ao anatin'izany ny fironana hamono tena, ny fivalanana, ny tsy fahampian'ny torimaso ary ny fahafahan'ny fiankinan-doha.
Azo ampiasaina ihany koa ny Viagra ary mahomby amin'ny marary sasany. Ireo zava-mahadomelina fanatsarana ny fananganana ireo dia toa mampihemotra ny ejaculation. Saingy, tsy ekena ireo pilina ireo noho io antony io ary noho izany dia mety ho sarotra ny mahazo azy ireo.
Fisorohana ny ejaculation aloha: ahoana no hisorohana ny ejaculation aloha loatra?
Fantatrao daholo ny momba an'io toe-javatra io sy ny zavatra aterak'izany, fa ahoana kosa no hampijanonanao azy? Nandritra ny taonjato maro - eny, henonao fa marina, taonjato maro - ny lehilahy erak'izao tontolo izao dia namorona fomba hanakanana ny PE amin'ny lalany, nefa tsy nisy fahombiazana firy. Ankehitriny dia mahomby kokoa ny lehilahy noho ny siansa. Ireto misy fomba sasany hisorohana ny ejaculation aloha loatra ary voajanahary.
Fomba iray malaza amin'ny fisorohana ny ejaculation aloha dia ny fampiasana kapaoty. Ny fimailo dia tsara ho an'ny firaisana ara-nofo azo antoka, hisorohana ny fitondrana vohoka sy ny STD, ary manana tombony fanampiny izy ireo amin'ny fampihenana ny fahatsapana ny filahianao mandritra ny firaisana ara-nofo, izay fomba tsara hisorohana ny ejaculation aloha loatra.
nikasikasika ny filahiako
Fomba iray hafa tsotra nefa mahomby amin'ny fisorohana ny ejaculation aloha dia amin'ny alàlan'ny fandotoana adiny iray na roa alohan'ny hanaovana firaisana. Izany dia sarotra kokoa ny mahatratra ny fara tampony amin'ny manaraka, amin'izay manampy anao hisorohana ny ejaculation aloha. Raha atambatra ireo fomba roa ireo teknika maromaro ianao dia mety haharitra ela kokoa eo am-pandriana.
Ny fomba tsotra indrindra hampijanonana ny ejaculation aloha loatra dia ny fanovana fomba. Raha mahatsapa ianao fa vonona ny hamarana mandritra ny firaisana dia atsaharo avy hatrany ny firaisana ary ampiasao ny iray amin'ireto tetikady telo ireto:
Mampiasà fihetsiketsehana boribory sy miadana kokoa. Azonao atao ny mampiato ny fara tampony amin'ny fanovana ireo kapoka ireo. Raha tokony hokapohina tsy tapaka dia ampiasao kapoka boribory, miadana kokoa kosa. Izany dia mampifantoka ny saina avy amin'ny masonao (ny tendron'ny penisanao) mankany amin'ny filanao iray manontolo, izay tsy dia manentana loatra.
Manova toerana. Angataho ny sakaizanao hanova toerana. Ny zoro samy hafa dia mampiato ny fanentanana ny filahiana ankehitriny ary 'mampisavoritaka' azy.
Misintona eo amboniny. Azonao atao ny manakana ny fara tampony amin'ny alàlan'ny fanodikodinana ny filanao. Rehefa tsapanao fa mahatratra ny fara tampony ianao dia esory ny sakaizanao ary apetaho amin'ny scrotum anao. Mihamafy sy miakatra ny scrotum rehefa miandry ny fara tampony, hanafanana ireo trondro alohan'ny hiakarany ho any ambony, raha tsy hiteny. Amin'ny alàlan'ny fisintonana azy dia mampiato ny fizotrany izany.
Ny fandresena ny olan'ny ejaculation aloha dia mety mitaky fotoana sy fampiharana. Zava-dehibe ny fahatsoran-tena amin'ny vadinao ary miresaka momba ny fihetsem-ponao. Ny fizarana fahatokisana sy fangorahana dia hanampy amin'ny famahana ny olana sy hampiroboroboana ny maha-akaiky. Raha mahatsikaritra ianao fa tsy mihatsara ny ahiahy ejaculation aloha dia tadidio fa eo an-tanan'ny mpitsabo mahay manao firaisana ny fanampiana.